Mahita ny Kristianisma Ao Japana, Izay Vitsy An’isa Ny Mpino. · Global Voices teny Malagasy
Mahita ny Kristianisma Ao Japana, Izay Vitsy An'isa Ny Mpino.
Nandika (en) i Izumi Mihashi
Voadika ny 19 Avrily 2015 9:04 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Italiano, Español, Swahili, 日本語
Masoandro mody manazava ny hazofijaliana. Sary avy amin'ilay mpisera Flickr, Sharon.
Eo amin'ny isan'ny mpanara-dia, sokajiana matetika ho fivavahana lehibe manerantany ny Kristianina. Na izany aza, vitsy dia vitsy ny Kristianina ao Japàna, izay latsaky ny 1% n'ny mponina no manome lanja ny finoana Kristianina.
Tsy fahita firy ao Japàna ny ara-panahy araka ny ahafantarana sy ahazoana azy any amin'ny firenena Tandrefana na eo amin'ny fomban-drazana Jodeo-kristianina. Hoan'ny Japoney antonontonony, ny Kristianina dia ampifandraisina betsaka amin'ny mariazy any amin'ny trano fiangonana sandoka miaraka amin'ny pasitera sandoka.
— ぷうママ (@sheep4016) February 14, 2015
Tena mahafinaritra ity trano-fiangonana fanaovana mariazy ity (／_;)/
Amin'ny fampiasana solon'anarana, miditra aterineto ny Japoney sasany mba hanambara ampahibemaso ny finoana mahakristianina azy ireo. Lahatsoratra bilaogy iray ohatra namoaka fanehoan-kevitra am-polony momba ny Kristianina ao Japàna.
Ao amin'ny lahatsoratra bilaogy, bilaogera tsy mitonona anarana iray ao Japana namariparitra ny fifandraisany amin'ny Kristianisma:
Mahatsiaro tena ho latsaka ambany aho: nahoana no toa mahomby ireo olona manodidina ahy, kanefa tsy mba mahavita na inona na inona aho? Ka rehefa mihatakataka amiko ny hafa manodidina ahy, mahatsiaro te-hitomany amin’alahelo sy hatezerana aho, ary manontany tena hoe nahoana no izaho irery no tsy maintsy mijaly tahaka izao.
Matetika lazaina fa raha te-hanova izao tontolo izao ianao, dia tsy maintsy manova ny tenanao. Ary tonga tamiko tahaka ny tselatra izany. Angamba ny hany azoko atao dia ny manaiky fa misy karazana andriamanitra tia ahy.
Raha ny marina anefa, tsy mino aho fa misy Andriamanitra, ka sarotra ho ahy ny milaza fa manam-pinoana aho.
Saingy niezaka nanaiky aho fa misy Andriamanitra ary nandinika ny tenako aho fa tian'izany karazana fisiana izany, izay nitarika ahy hisaotra azy noho ny fitiavany lehibe. Tsy mbola niaina zavatra tsara kokoa mampisy fankasitrahana toy izany. Menatra aho milaza ny fahatsapako fa tsy mba nankasitraka ny hafa aho.
Sahiran-kevitra ny bilaogera iray eto, te hanana finoana kristianina izy, saingy tsy tena mino fa misy Andriamanitra.
Na dia izany aza, sady nahasanganehana no nahafaly ilay bilaogera ny fahazotoana ara-pivavahana.
Andraso, tsy endrika miavaka amin'ny fandraisana anjara amin'ny fivavahana ve izany? Sa efa tafiditra amin'izany aho?
Tsy afaka handroaka zavatra nahasarika ny foko aho. Tara loatra ihany koa ny hieritreritra azy ho efa tapitra. Mampianatra ahy ny foto-pinoana hiaina amin'ny mahaolombelona ary hitako fa tena mety amiko izany. Te-hihaino izany aho, ary hiaina fiainam-panahy be dia be arakaraka ny anatonana akaiky, saingy tsy mahafolaka ny saiko aho satria fombam-pivavahana izany.
Mino aho fa tsy tian'ny ray aman-dreniko aho mitoky amin'ny fombam-pivavahana. Eny, rehefa manohitra ahy izy ireo amin'izay ataoko, ny ataoko mampisy fiovana kely.
Tsy maintsy mitahiry ity fahatsapana ity ho tsiambaratelo aho.
Maro tamin'ireo mpaneho hevitra no namaly nanohitra ny lahatsoratra. Mpaneho hevitra iray takass32 nandà ny fisian'andriamanitra.
Heveriko fa ny fahavitana maka sary an-tsaina na mino “anarana” tsy misy izay mendri-kaja sy mpandefitra aminao no fototry ny fanolora-tena ara-pivavahana.
Nanana hevitra tsara kokoa amin'ny fananana finoana i honeybee, mpaneho hevitra iray hafa tao amin'ny lahatsoratra bilaogy, saingy nanasongadina ny lafy ratsin'ny fivavahana ihany koa.
Tsy misy maha ratsy ny miditra amin'ny fombam-pivavahana raha tsy hoe miteraka fiantraikany ratsy amin'ny olona manodidina anao ianao, tahaka ny fandresen-dahatra tsy an-kiato, miezaka mivarotra bokikely ara-pivavahana, na manery hanaraka foto-kevitra ara-pivavahana.
Mpaneho hevitra iray, ketudan, kosa nihevitra fa mety hidiran-doza amin'ny fidirana amin'ny fombam-pivavahana ny bilaogera.
Indrisy, maro dia maro ireo fivavahana sy fiangonana vaovao izay mamaritra ny tenany ho “Kristianina”, ka manoro hevitra anao aho hiditra Google hijery ny anaran'izany fiangonana na fivavahana izany.
Efa nanana enti-mody aho indray mandeha mba hanatrika lanonana ka nitsidika “fiangonana mendrika” tao amin'ny manodidina aho, saingy fivavahana adaladala ahitana olona milaza fa minisitra nitendry gitara tao anaty efi-trano miendrika Japoney no hitako.
Nahatsapa fangorahana noho ny mahasarotra ny fananana finoana ara-pivavahana ao Japàna i gohankun.
Azo antoka fa mandreraka ny manana fivavahana manokana ao Japana. Nandalo fahasarotana aho satria avy amin'ny fianakaviana kristianina ary Kristianina koa ny tenako. Mbola mijaly aho indraindray. Misy fotoana aho maniry fa tokony teraka tany Andrefana. Ho mora kokoa ny fiainana amin'izay.
Nihevitra ny mpaneho-hevitra iray nows_s fa fomba iray hafa hamakivakiana ny fiainana ny fombam-pivavahana.
Mafy loatra hoan'ny olona ny fanatrehana ny fiainana, ka manolo-tena amin'ireo andriamanitra isika, miantehitra amin'ny firenena iray, na lasa miankin-doha amin'ny fandraharahana, olona manana toetra roa, nikôtinina, na zava-pisotro misy alikaola. Raha ahafahantsika manamora kokoa ny fiainana izany, inona ny olana ?
Japàna : miteraka ahiahy ilay fanapahankevitra hamarina any an-dranomasina ireo rano voapoizina avy ao amin'ilay toby famokarana herinaratra nisy fahasimbàna tao Fukushima
11 Janoary 2021Azia Atsinanana
Tsy afaka miady amin'ny COVID-19 ny sakafo japoney mahery, saingy mety hanalava ny andro iainanao
24 Desambra 2020Azia Atsinanana
Nahatratra ny ‘kanji-n'ny taona’ ny COVID-19